तपाईँको कत्रो छ? ला…मो समय काम गर्छ? दोहोरो (अश्लील) अर्थ आउने विज्ञापन दिनेलाई देखाइदिने कि यत्रो छ – MySansar
तपाईँको कत्रो छ? ला…मो समय काम गर्छ? दोहोरो (अश्लील) अर्थ आउने विज्ञापन दिनेलाई देखाइदिने कि यत्रो छ
बुधबार कान्तिपुरमा एउटा विज्ञापन छापियो- तपाईँको कत्रो छ ? गोजीमा मोबाइल जस्तो देखिए पनि यो विज्ञापन खासमा जानाजानी दोहोरो अर्थ आउने खालको बनाइएको थियो। यसैको फेसबुक विज्ञापन त झनै दोहोरो अर्थ दिने खालको थियो।
त्यसमा कलाकारले सोध्छन्- तपाईँको कत्रो छ ? ला….मो समय काम गर्छ?
त्यतिमात्र होइन, दोहोरो अर्थ दिने क्रममा यसले आफ्नो फेसबुक पेजमा केराको फोटोसमेत राखेर तपाईँको कत्रो छ भनेर सोध्यो
खासमा यो कलर्स मोबाइलको Colors Pride P-80 & P-50 स्मार्ट फोनको विज्ञापन रहेछ।
मोबाइलको विज्ञापनलाई जानाजानी द्विअर्थी, अश्लील बनाउन खोजेर यी विज्ञापन बनाउने कम्पनी र बनाउन स्वीकृति दिने कम्पनीले उपभोक्ताको किन अपमान गरेको हो? के साँच्चै उनीहरुले तपाईँको कत्रो हेर्न खोजेकै हो त? तपाईँलाई पनि यो विज्ञापन देखेर दिक्क लागेको छ भने मेरो यत्रो छ भनेर उनीहरुको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/colorsmobilenepal उनीहरुलाई दिक्क लाग्ने गरी कमेन्ट गरिदिने कि 🙂 आखिर उनीहरुले खोजेकै तपाईँको कत्रो छ भनेर जान्न चाहेको हैन? दिक्कलाग्दो ला…मो ला…मो कमेन्ट गर्दिने कि ?
8 thoughts on “तपाईँको कत्रो छ? ला…मो समय काम गर्छ? दोहोरो (अश्लील) अर्थ आउने विज्ञापन दिनेलाई देखाइदिने कि यत्रो छ”
य………त्रो छ भनेर देखाई िदनु पर्ने िबज्ञापन बनाउने, खेल्ने र टेलिभिजनमा देखाएर पैसा कमाउनेहरुलाई ।
हसाउनेको नाम मा भद्दा मजाक. यो कमेडियन को ओभर acting नै लाग्छ मलाई चाहि !
सुन्दा हामीलाई नराम्रो लागेको चाही हामीले आफैले यसको गलत उदाहरण लिएर हो। हुन त बिज्ञापन गर्नेले दोहोरो अर्थ लागोस भनेर जानी जानी गरेको होला तर यो त हामी कसरी लिन्छौ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। गलत अर्थ मा नै लिने हो भने गलत नै देखिन्छ।
जसले जे गरे पनि हुने रहेछ । नैतिकता, अनुशासन, िजम्मेवारी केही नचाहिने ।
असभ्य र अशिक्षित हरु जान्ने सुन्ने भए पछि यस्तै हुन्छ.
बकलोल! गेहरुको अर्चना पनेरु जस्तो रोल भयो। मास्टर भएर कमेडी र उत्ताउलोपनमा फरक गर्न नजान्ने भन्ने त हुँदैन। यस्तो विज्ञापन नखेल्दा, नबनाउदा र प्रशारण नगर्दा नै राम्रो।
यो बिज्ञापन बनाउने व्यक्ति, मलाई थाहा छ | खोइ अरु को त थाहा भएन, बाहिर बाट हेर्दा चै यो बिज्ञापन बनाउने व्यक्तिको चै सानै छ.. अब के भन्ने चै मिलाएर बुझ्नुस …
अनी ‘ला…मो’ भनेर कमेन्ट गर्‍यो भने त, हड्डी खप्पर मात्रै बाँकी राख्ने रैछ, भो गरिन्न!!